Ururka HIRDA oo abaalmarin dhowaan la siiyey ku tilmaamay dhiiri-gelin muhiim ah (Dhegeyso) – Radio Daljir
Oktoobar 19, 2013 5:03 b 0
Amesterdam, October 19, 2013 – Ururka ka shaqeeya arrimaha qaxootiga Soomaalida ee HIRDA isla markaasna ay maamulkiisa leeyihiin dad Soomaali ah ayaa sanadkan la gudoonsiiyey abaalmarin muujinaysa in ay kaalin wayn ka qaateen horumarka bulshooyin kala duwan iyo weliba kuwa qaarada Afrika.
Wargays caan ah oo ka soo baxa dalka Holland sanad kasta ayaa abaal-marin gudoonsiiyey maamulaha ururka HIRDA, qoraal ku saabsan abaal marinta oo la soo bandhigay ayaa muujiyey in ururku mutaystay markii la qiimeeyey howlaha ay ka qabteen Afrika gaar ahaan Soomaaliya reer Holland.
Ururka ayaa ka mid noqday sanadkan 20 xubnood oo la gudoonsiiyey abaalmarintaas oo noqonaysa markii ugu horaysay oo la siiyo shaqsi ka soo jeeda gobolka barriga Afrika, waana maamulka HIRDA Faadumo Maxamed Faarax.
?Abaalmarintan maaha lacag ee waa garasho iyo qofka ama ururka oo la muujinayo waxqabadkiisa bulsho, sanadka ururkeena ayey soo bandhigeen oo abaalmarinta siiyeen, iyagoo qiimeeyey sida aan wax ugu qabano bulshada ka timaada Afrika ee Nederland jooga.? ayay tiri maamule Faadumo Faarax
Abaalmarintan waxaa nooceeda oo kale horay loo siiyey siyaasiyiin iyo xubno firfircoon oo ka dhex muuqda hormarka dalalkooda iyo wax u qabashada bulshada, taasoo noqonaysa dhiiri-gelin dardar gelisa in laga gudbo caqabadaha jira.
DHEGEYSO: Faadumo Faarax oo HIRDA maamusha waxaa waraystay Cabdirisaaq Silver oo daljir ka tirsan